UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo – Ubukhosi
Home/ Umlando Wethu/UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo
UZulu useyimivi uvevelisa okomhlanga emanzini ubona kuhlaselwa iSihlalo. Ukuzwakalisa ilaka lakhe uZulu uzobuthana eSishayamthetho ezizobe sikwaNongoma kanti naseGoli bazimisele ngokulibamba ngqi
EMUVA kwesikhathi esingangesonto kuzwakale ukuhlaselwa kweSILO kanye neSihlalo, kubonakala sengathi uZulu usufuna ukudweba umugqa entweni oyibiza ngokuthi ‘wukukhonjwa kweSihlalo ngomunwe’ yilabo abenyanya uBukhosi. Kuleli sonto iphephandaba laboHlanga lithole izincingo eziningi ebezivela kubaholi, izinduna zezinsiwa kanye namalungu omphakathi bonke besho ngazwilinye ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi nabo basukume bavikele iSihlalo.
Lokhu kulandela inkulumo enohlevane eyethulwe ngabaholi boFasimba (igama lebutho leNgonyama uShaka) iSouth African Communist Party (YCL) kanye noVukayibambe (igama lebutho leNgonyama uDinuzulu) okuyinhlangano yentsha kaKhongolose (ANCYL). Phakathi kokunye laba baholi balezi zinhlangano zombili bathe ‘kasikho isidingo seSILO’ nokuthi umgubho ngempilo yeLembe kwaDukuza yinto engathi shu neyavunywa nguhulumeni okhona ngoba kwenzelwa ukuba kube nokuthula kuleli.
Abaqale ukugadla koNgangezwe Lakhe kube nguVukayibambe obuphendula inkulumo yeSILO esiyenze kwaDukuza lapho seluleke uhulumeni ukuba akagweme ukusebezinsa izikhangisi eziyizimpawu zokukhankasa eMkhosini kaZulu nesathi ISILO lokho kungase kuhlukanise phakathi iSizwe esivela emaqenjini nasemikhakheni eyehlukene. Khona lapho Ongangezwe Lakhe wababaza inkohlakalo ayikhomba eMnyangweni owengamele izindaba zamaciko, nakhomba izinto eziphathekayo nezisemehlweni abantu.
Kubukeka lokho kwawunenga uVukayibambe owabe usuphendula, phezu kokuthi uNgqogqoshe Wezempilo kulesi sifundazwe uMhlonishwa uDhlomo ngokwemibiko yamaphephandaba acelela uhulumeni umaluju wathembisa nokuthi lokhu okuyizikhalo kuzobhekwa ngelibanzi. UVukayibambe wakhipha isitatimende esasiveza ukuthi bona bahumushe inkulumo yeSILO njengokuhlasela umholi wabo nonguNdunankulu Wesifundazwe uMhlonishwa uSenzo Mchunu. Khona lapho le nhlangano yentsha ka-ANC yabuye yathi okukhulunywa yiMbube ngamabhenela akungayekwa ngoba phela ‘uhulumeni unelungelo lokukhangisa nxa kuxhase yena’. Akuphelanga sikhathi singakanani lwabe selugadla uFasimba abaholi balo abashiya abangalazi koNgangezwe Lakhe kanye noBukhosi.
Nokho kubukeka konke lokhu sekuwume emphinjeni uZulu ngoba usuqalile ukuphendula izinduku usebenzisa imikhakha eyehlukene. UNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene ekhuluma neBAYEDE utshengise okukhulu ukudumala ngalokhu akubize ngesehlo esehlele uZulu. “Awu impela kangazi ukuthi sehlelwa yini njengoZulu, lapho sibuka iNkosi yethu ijivazwa ngalolu hlobo. Ukukhuluma okuthini lokhu okuthi ISILO siyenzelelwa nxa sithola lokhu esikufaneleyo? Ngibhalile ephepheni lansukuzonke lesiZulu ngesikhathi lolu daba luqala ngibabaza, kepha nanamuhla lokho akukakhishwa okukhishwayo yilokhu okujivaza ISILO. Lena akuyona inhlamba kuso iSILO kepha yinhlamba kithi uqobo njengoZulu. Obabamkhulu bafa befela ubukhosi nezwe lokhu namuhla esethukwa ngakho. Impela sivelelwa yini?” UShenge ube esebuza ukuthi kambe nxa kuyizingane ezonile bona ‘abadala’ kunabo bathule bathini.
Loyo onguSihlalo WeNdlu Yobuholi BoMdabu KwaZulu-Natal, iNkosi uPhathisizwe Chiliza naye uhambe kulawo mazwi kaShenge wanxusa wabuye waphakamisa ukuba abaholi abadala benhlangano yaMakhomanisi bakhuze ngokushesha intsha yabo ekudeleleni iSILO neSihlalo.
“Sithola ukushaqeka nokudumala ngendlela uphiko lwentsha yamaKhomanisi olukhombisa ukungabi nanhlonipho ngayo kuNgangezwe Lakhe. Ngakho sinxusa abaholi baMakhomanisi ukuba bayikhuze le nto ngoba lokhu abakwenzayo kufana nokuhlokoloza isidleke seminyovu izithulele. Phela yimpi lena ephehlwayo ebhekiswe esizweni samaZulu,’’
INkosi uChiliza iqhube yathi lolu wudaba olubucayi olungadala udungunyane ezweni lonke. “Nawe uyazizwela ukuthi kumanje isizwe samaZulu siyaveva intukuthelo ngale ndelelo yentsha yamaKhomanisi.’’ INkosi uChiliza iphinde yexwayise osopolitiki ukuba bayeke ukudlalela ngaseMbubeni uma belwa izimpi zabo zangaphakathi ngoba lokho kuzoshisa izwe. “Akudlalelwa eMbubeni. Othinta iSILO kufana nokuthi uhlasela uZulu wonkana. Ngakho siyanxusa abaholi bamaKhomanisi ukuba bayisukumele le ndaba isimo singakaphumi esandleni.’’
IBAYEDE isingaqinisekisa ukuthi kusukela kule mpelasonto kuzoba nemihlangano kwaZulu-Natal naseGoli nayilapho kuzobe kudingidwa khona ukuthi sivikelwa kanjani iSihlalo. Ngokuthola kweBAYEDE kuhlelwa ukhukhulelangoqo ozobe uya emalungeni eSishayamthetho saKwaZulu-Natal azobe ehleli kwaNongoma ekupheleni kwale nyanga. Kanti futhi kuhlelwa ukuba naseGoli kube yileso njengoba kuzoba nokuxhumana noZulu oseGauteng namaphethelo. Nezinhlangano kanye namaciko nawo athe sekwanele, akungadelelwa iSILO neSihlalo. Ngokuthola kweBAYEDE okhulumela uhlaka lwezinduna uMhlabuhlangene, induna, uNkinobho Zulu ukuqinisekisile ukuthi kule mpelasonto kuzoba nomhlangano ophuthumayo ukuhlela umkhankaso wokuvikela iSihlalo ekuhlaselweni ngabantu abenyanya uZulu. “ Lokhu kokukhonjwa kwesihlalo ngomunwe yinto yokugcina engenzeka sisaphila njengezinsizwa, nesihlangu soBukhosi. Uma sikuyeke lapha ngeke siphinde sivimbe lutho namuntu ozogcwanekeka ngakoMdala nakuZulu. Okhokho bafa befela lesi Sihlalo ngakho nxa kukhomba ukuthi nathi kasife akube njalo. Thina akukho ukufa okuyosithokozisa njengokufela uBukhosi. Sifisa ukunxenxa isizwe samaZulu ukuba sisukume sime ngomumo ukuvikela iSihlalo okubonakala sihlaselwa nxa zonke.’’ kusho induna uZulu.
Okhulumela inhlangano yabasemahositela KwaZulu-Natal ebizwa ngoBunye Bamahositela, uMnu uMthembiseni Thusi uthe nabo bayaweseka umkhankaso wokuvikela iSihlalo. “Impela kumele siwakhombise la maKhomanisi ukuthi thina sizwe esimnyama asiwona amavaka, futhi sizimisele ukufela iSihlalo neSILO sethu. Sithi sekwanele sibekezelele inhlamba ebhekiswe koNgangezwe Lakhe. Empeleni lezi zingane zoFasimba zifuze abaholi bazo abadala bezepolitiki okuyibo abalwisana noBukhosi baKwaZulu yingakho ubabona bethule bengazikhuzi lezi zingane ekugcwanekeleni ekhanda leMbube.’’ kusho uMnu uThusi. UMnu uThusi uthi kumanje uZulu ohlala emahositela uyaveva yintukuthelo ngenxa yale ndelelo yamaKhomanisi.
“Kungani abaholi abadala bengaphumeli obala bagxeke le nkulumo yalezi zingane uma kungukuthi abahambisani nale nkulumo yazo. Sithi bazoyikhotha imbenge yomile akudlalelwa esizweni samaZulu. Ohlasela iMbube uhlasela uZulu wonkana,’’ kuqhuba uMnu uThusi.
UMnu uThusi uqhube wathi: “Akumele iSILO size sithi makhosi ezizwe nani sizwe sami nathula ngidikadikwa ngamambuka nikhona. Kumele sizisukumele thina njengesizwe sivikele iMbube noBukhosi. Phela kumele sikhombise ukuthi iSilo sizele izinsizwa hhayi amavaka. Sonke sithi ayihlome ihlasele sikhathele ukungcofwa ngezinhlamba iSILO sethu. Sizimisele ngokusifela,’’
UNobhala wamaKhomanisi KwaZulu-Natal, uMnu uThemba Mthembu ethintwa ngalolu daba uthe bona bengubuholi besifundazwe abakwazi ukukhuza uphiko lwabo lwentsha ekudeleleni iSILO ngoba lokhu kwenziwe ngubuholi obuphezulu.
“Sithe uma sibuzisisa ngale nkulumo eyenziwe nguComrade uLuthuli sithole impendulo yokuthi abekusho ubengakusho egameni lenhlangano kodwa ubeveza imizwa yakhe hhayi egameni lenhlangano. Ngakho-ke akukho esingakuphawula.’’
Ebuzwa uMnu uMthembu ukuthi ngabe zikhona yini izinyathelo zokuqondisa izigwegwe abazozithathela laba baholi bentsha yabo ngokudala uhlevane ngezinkulumo ezihlasela iSILO uphendule kanje: “Cha, angithandi ukuqamba amanga thina njengobuholi besifunda asikwazi ukungenelela kulolu daba ngoba asinawo amandla kodwa ngubuholi obuphezulu kuphela obungangenelela.’’
UMnu uMthembu akafunanga ukucacisa noma lapha esifundazweni bayaziqhelelanisa yini nezitatimende zoFasimba. “Akukho engingakusho ngaphandle kokuthi thina lapha sithi akuhlonishwe uBukhosi kanjalo nazo zonke ezinye izinhlaka zikahulumeni.’’ kuqhuba uMthembu.
Abafundi abaningi beBAYEDE bashaye izincingo abanye babhala imilayezo nezincwadi begqamisa ukukhathazeka kokuthi Ongangezwe Lakhe uhlaselwa nje ubekhuluma into ebeyaziwa ngunoma ngubani yenkohlakalo kanti futhi ukuthi kabaneme ngokungahlonishwa kwakhe neSihlalo. UMnu Nhlakanipho Nhlumayo uthe: Ngeke sadlala abantu okuthi uma into esiyazi sonke mayelana nenkohlakalo kule lizwe, kuthi nxa ishiwo yiSILO bese abantubesethuka. Mina ngiyilungu likaKhongolose kepha nginguMzulu kuqala ngakho amaKhomanisi akangasoni imimoya. uMnu Nkanizabasha Ndaba yena uthe: Njalonje abaholi bentsha uma befuna ukugqama, badlalela kithi Mazulu, kumele bazi ukuthi ukuthinta izinyane lengezengeze basuke bethinte uZulu omnyama ondlela zimhlophe, bayothi baphendukelwe yidlozi, mhla sazinika isikhathi sabo. Kanti uMnu Patric Nxumalo yena uthe: Ayi yinhlamba lena ebhekiswe kithi njengamaZulu.ngibona iANCYL ibhula ihawu emehlweni eSILO. Baxwayiseni angeke bamvimbe uZulu esefikile bayokubona okwabona nguPawula kungavuka uZwide emalibeni.
uNkz Sindi Sibanyoni yena uthe: “Okubuhlungu wukuthi lokhu kokungahlonishwa kwabantu abadala noma ngabe yiSILO noma nguMengameli wezwe kuyanda kuleli nokuyinto kungekudala ezosixaka.”
Loludaba lwashicilelwa: 8 – 15 kuMfumfu 2015